बागी ३’ मा पहिलो पटक बाबु र छोरा एकसाथ देखिँदै ! «
बागी ३’ मा पहिलो पटक बाबु र छोरा एकसाथ देखिँदै !
Published : 25 January, 2020 9:44 pm
गत साल ‘वार’ जस्तो ब्लकबस्टर चलचित्र दिएका अभिनेता टाइगर श्राफ अहिले आफ्नो नयाँ चलचित्र ‘बागी ३’ को छायांकनमा व्यस्त छन् । यो फिल्ममा उनको जोडी अभिनेत्री श्रद्धा कपूरसँग बाँधिएको छ । यसबीच, फिल्ममा अभिनेता ज्याकी श्राफको पनि प्रवेश भएको छ । ज्याकीका छोरा हुन्, टाइगर । फिल्ममा पनि उनीहरु पिता र छोराको भूमिकामा देखिने बताइएको छ ।